Afisy dimy an'i Szabó amin'ireo voafidy ho mpilalao sarimihetsika tsara indrindra ao amin'ny BAFTAs | Famoronana an-tserasera
Isan-taona BAFTA, ny British Academy Film Awards, mifidy mpanakanto hamokatra andiana afisy ho an'ireo voafantina dimy amin'ny sokajy sary tsara indrindra.
Tamin'ity taona ity dia ny Levente Szabó no voafantina, fantatra amin'ny tambajotran'ny tambajotra ho an'ireo sary manokana natao ho an'ny sarimihetsika sasany ho solon'ny izay fantatry ny besinimaro. Voninahitra iray arakaraky ny anondroany ary izany dia mitondra antsika alohan'ireo voatendry dimy handray ny sarimihetsika tsara indrindra amin'ny taona hatramin'ny nahazoana ny loka BAFTA.
Tao anatin'ny roa herinandro dia voatery nanao ny afisy izy ho an'ireo horonantsary dimy notendrena, satria, tamin'ireo kandidà roa ambin'ny folo tamin'ny volana desambra, ireo izay nandray anjara mba hahazoana ny loka farany dia vita tao anatin'ny dimy.
Ireo horonantsary dimy notendrena dia Carol, Spotlight, The Revenant, The Big Short ary The Bridge of Spies. Horonantsary miisa dimy avo lenta Izay nanoloran'i Szabó ny asany lehibe rehetra hanolorana antsika ny fahitany manokana ny tsirairay amin'izy ireo.
Fanoharana dimy nahagaga be natao tamin'io fomba Szabó manokana io izay hita tao amin'ny gala BAFTA ka nomena anarana ny Revenant toy ny sarimihetsika tsara indrindra. Avy amin'ny pejy ofisialin'ireto loka ireto no ahitanao horonan-tsary roa ahitantsika ny sanganasa noforonin'ilay mpanakanto sy ny fomba famoronany ny tsirairay amin'izy ireo amin'ny alàlan'ny hosodoko nomerika. Photoshop dia ny programa ampiasain'ity mpanao sary ity izay manana nomerika ho mpanentana lehibe indrindra.
Una fandraisana anjara manokana an'ity mpanao sary ity ho an'ireo loka BAFTA izay nifidy ny horonantsary The Revenant ho mpandresy amin'ny sary tsara indrindra ary nanantena i Leonardo DiCaprio fa handresy an'i Oscar notadiaviny tamin'ny herinandro ambony.
Manana ny afisy rehetra ianao eto.
Daniel Foust koa dia manana predilection manokana amin'ny sary hosodoko nomerika toa azonao jerena amin'ity fidirana ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Ny afisin'i Szabó amin'ireo olona dimy voatendry ho an'ny sarimihetsika tsara indrindra amin'ny loka BAFTA